ဒီချုပ်အစိုးရ နှစ်နှစ်တာအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေအနေ ယခင်ထက် ဆိုးရွားလ?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို ခွင့်အခြေအနေမှာ ယခင်ကထက် ပိုမိုဆိုးရွားလာကြောင်း အသံအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့် စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြော ဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေသည့် အသံအဖွဲ့မှပြုစုသည့် အဆိုပါစစ်တမ်းကို ဇွန် ၁ဝ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်း ရှိ၊ ဖန်တီးရာရုံးခန်းတွင် သတင်းစာရှင်းပွဲကျင်းပ၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရမှုများ မြင့်တက်လာ ခြင်း၊ သတင်းသမားများ တရားစွဲဆိုထောင်ချခံရမှုများ ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာတွင် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ကို မပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေအား ပြဋ္ဌာန်းရာတွင် အားနည်းချက်များစွာရှိနေခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပိုမို တင်းကျပ်သည့် အခြေအနေဖြစ် အောင် ဖန်တီးပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့် တပ်မတော်ဘက်မှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းများကို မဟန့်တားခဲ့ ခြင်းများကြောင့် လွတ်လပ်စွာထုတ် ဖော်ပြောဆိုခွင့်မှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းစစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) သည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေဖြင့် ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် တရားစွဲဆိုမှု ၁၁ မှုသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအစိုးရလက်ထက် နှစ်နှစ်အတွင်း ၁၁၃ မှုထိရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)အ ပါဝင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အား ထိခိုက်စေသည့် အ ခြားသော ဥပဒေပုဒ်မများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လိုအပ် နေသည့်ဥပဒေများကို အသစ်ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် လွှတ်တော်သို့ အကြံပြုကြောင်းလည်း ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဖော် ပြထားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လွှတ်တော်မှဥပ ဒေပြုရေးများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှတ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံကာ တောင်းဆိုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်သွားရန်လည်းရှိကြောင်း အသံအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ မောင် ဆောင်းခက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။
”ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဆုံးစာတမ်း၊ တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါကိုကိုင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုတာတွေကို တရားဝင် လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းအပြင် အစိုးရ၊ တပ်မ တော်၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားရုံးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီ ဒီယာကောင်စီတို့ကိုလည်း ပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်များမဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် အကြံပြု ချက်များကို ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကြားဖြတ် ဝင်၊ မဝင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဆွေးနွေးမှု ရလဒ်အပေါ်လည်း မူတည??